रबिलाइ कारबाही गर्ने आधारनै छैन चितवन प्रशासनले किन हातार गर्यो – All top Here
Home/भिडियो/रबिलाइ कारबाही गर्ने आधारनै छैन चितवन प्रशासनले किन हातार गर्यो
रबिलाइ कारबाही गर्ने आधारनै छैन प्रशासनले किन हातार गर्यो भन्दै गर्जिए सुरेन्द्र भन्डारी..भिडियो हेरी जति सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।रबिलाइ कारबाही गर्ने आधारनै छैन प्रशासनले किन हातार गर्यो भन्दै गर्जिए सुरेन्द्र गर्जिए..भिडियो हेर्न तल??? जानुहोस ।
यो पनि …Breaking News>>> रबि लामिछानेलाई अदालतले दियो यस्तो आदेश ..हेर्नुहोस्
चितवन : संचारकर्मी रवि लामिछानेलाई छानविनका लागि चितवन जिल्ला अदालतले ५ दिन म्याद थप गरेको छ। जिल्ला न्यायधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार लामिछानेसहित तीन जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
लामिछानेसहित रुकु कार्की (अस्मिता) र युवराज कँडेलविरुद्ध शालिकराम पुडासैनी आ.*त्महत्या दुरुसाहन मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। शुक्रबार चितवन जिल्ला अदालतले रविसहित तीनैजनालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
पुडासैनीकी पत्नी सम्झना पुडासैनीले पनि आइतबार काठमाडौं प्रहरी परिसरमा पुगेर लामिछानेसहित तीनविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छन्। पुडासैनीले आ.*
त्महत्याअघि आफूलाई मर्न बाध्य पारेको भन्दै रेकर्ड गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीहरु पक्राउ परेका थिए।
विष्णुमाया को जिवनमा नसोचेको वज्रपातआमा बचाउन निकै हारगुहार गरिन